FAQs - China Kanaif muridzo unoridzirwa Systerm Ltd
Tine pachako mafekitari vane makore 20 kugadzirwa ruzivo. Tinogona kupa mutengo nani pane dzimwe kambani wokutengesera.
fekitari yedu aigona Export 30000 tani / gore.
Tine nyanzvi hwokugadzira tsvakurudzo chikwata. Vane makore 20 ruzivo.
Kana uine chaiyo zvinodiwa pamusoro chigadzirwa, vaigona kukubatsira kugadzirisa dambudziko.
Good sero sevhisi
We zvinopa pashure okutengesa basa newe.
Products aripo, zvichada mazuva 15 pakukurukura. Standard nguva wakurukura anenge 30-45 mazuva.
High basa inoshanda
Ticharamba edzai yedu yakanakisisa yokupindura iwe mumaawa 12.